(Sawirro) Garoonka Cawaale Stadium oo wali uu ka socdo Horyaalka kooxaha heerka koowaad ee G.Mudug. | Radio Gaalkacyo 88.2 FM
(Sawirro) Garoonka Cawaale Stadium oo wali uu ka socdo Horyaalka kooxaha heerka koowaad ee G.Mudug.
Garoonka kubada cagta Cawaale stadium ee magaalada Gaalkacyo waxaa galabta lagu soo gaba gabeeyay wareegii koowaad ee koobka kooxaha heerka koowaad ee gobolka Mudug gaar ahaan degmada Gaalacyo iyadoona lagu soo gaba gabeeyay kooxaha Yamayska iyo Shaanbalaas.
Ciyaartii u dhexsay Yameyska iyo Shaanbalaay ayaa waxay labada koxoodba ku talo jireen inay midba mida kale ka guuleysato si ay u hesho sadex dhibcood oo nadiifa waxaana si aad guusha uraadinaysay kooxda Yameyska maadaama kulamadii danbe oo dhan ay soogalaysay bar baro.
Kooxda Yameyska ayaa ugu danbeyn waxay guul dahabi ah ka gaartay kooxda Shaanbalaas iyadoona mar walba sameynaysay soo rogaalin celin waxayna kooxd yameyska guusha ku gaartay 3-2 taas oo usahashay inay wareegii koowaad ee horyaalka kooxaha heerka koowaad ee gobolka Mudug.